Warbixinta Waxqabadka Xafiiska Horumarinta Khayraadka Biyaha Sanadkii Tegay 2005 T.I. - Cakaara News
Warbixinta Waxqabadka Xafiiska Horumarinta Khayraadka Biyaha Sanadkii Tegay 2005 T.I.
Jigjiga(CakaaraNews) Talaado July 30,2013.Waxaa wariyaha Cakaara u suurto gashay in uu fursad u helo Wasiirada Xafiiska Horumarinta Khayraadka Biyaha DDSI Marwo Fartuun Cabdi Mahdi,islamarkaana uu Wax ka waydiiyay Heerka Waxqabadka Xafiiska Dhanka Biyaha Sanadkii Tegay. Wasiirada oo Si faahfaahsan u Qaadaa Dhigtay waxqabadka ayaa ay u qornayd sidan hoose warbixintii Waxqabadka ee xafiiska ee sanadkii tegay iyadoona ku bilowday  Marwo Fartuun:-Waxaynu wada ogsoonyahay in S/M 2005 ahmiyada 1aad, 2aad, 3aad in ay xukuumadu siisay helitaanka biyaha nadiifta ah iyadoo lagafa’iidaysanayso biyaha dhulka hoostiisa, Biyaha roobka iyo kuwa dooxooyinkaba.
 Hadaba waxaa markisii ugu horaysay lahindisay ama la sameeyay in la helo Riigag Awood u leh Qodida Ceelasha Gunta Dheer taasoo markii ugu horaysay Dalka Talyaaniga laga soo iibiyay,sidoo kale barnaamijka biyo ururinta(Kaydinta Biyaha Roobka) taas oo lagu ururunayo biyaha roobka Baraago,bali-biyood iyo Haraha(Dum) iyadoo 100% si toos ah ay u fulinayaan bulshada deegaanku halka barigii hore ay fulin jireen ganacsato ama qandaraslayaal kooban dhaqaalahuna uuna bulashada sitoos ah ugaadhi jirin waana mid Fursad dhaqaale iyo ka faaiidaysiba u abuurtay Bulshada Deegaanka.
 Hadaba S/M 2005 waxaa qorshaysnayd in daboolka biyaha nadiifta ee magaalooyinka la gaadhsiiyo 75% halka uu sanadkii hore ka ahaa 64%, waxaana lagu guuleeystay in la gaadhsiyo 72%.
 Waxaa kale oo qorshaysnaa in daboolka biyaha nadiifta ee miyiga la gaadhsiiyo 60% halka uu sanadkii hore ahaa 52%, Nasiib wanaag waxaa lagu guuleeystay in la gaadhsiiyo 59%,taasoo ka badan 7% Qorshihii yaalay.
Barnaamijka BiyoUrurinta 2005 T.I.
Iyadoo lagaduulayo Barnaamijka biyo ururinta, sanadkan waxaa la dhisay 700 oo barkadood iyada oo wakhti xadirkan ay socdaan dhismaha 42 barkadood oo cusub gabo-gabana ay marayaan.
 Sidookale barnaamijka biyo ururinta, waxaa ladhisay 2 Dam oo aad u mug waa-wayn lagana dhisay(qabalaha waaji) oo ka tirsan Degmada Qoraxay, Haffirdamyada Harshin, Cadadlay (Todob) iyo labiga.
 Waxaa kale oo dhamaystir taagan dhismaha 4 haffirdams(biyoxidheeno) oo kala ah Garawo( Dh/bur), Ceel Baxay( Gashamo), Dhanaan iyo Garbo. Biyo Galinta Magaaloyyinka iyo Miyiga.
 Mashruuca biyo galinta magaalada Jigjiga oo ay fulinayso shirkad wadanka Chinaha laga leeyahay, ayaa hada waxa u maraya 36% iyadoo hawlaha ugu muhiimsan ee laqabtayna ay tahay Dhismaha labo kayd-biyood( reservoiurs)( oo kala ah 600m3 iyo 300m3 ), 8km ayaa laqoday tuubooyinkiina lagaliyay, waxaa kaloo dhamaaday dhismaha guryaha pumpka iyo matoorada.  Waxaa la dar-dargaliyey biyo galinta magaalooyinka Godey, Q/Dahar, iyo Dh/Bur iyadoo loo adeegsaday barnaamijka WASH Program.
 Waxaa 100% dhamaaday dhismaha biyo-galinada tuulada Boranka(east imey) iyo West Gode (Beercaano) oo looga faaiideenayo barnaamijka Dibudajinta.( 2 tuulo aykacabayaan---km lagasoojiiday wabiga).
 Mahruucyada biyogalinada tuulooyinka Yaxasjabal (Goday) iyo Sankabar (Beercaano), 80% waa ladhamaystiray.Mashruuca DRS ee Maaliyadu fulinayso.
 Waxaa labilaabay biyogalinada tuulooyinka Hudet, DireDamo( dagmada Hudet) iyo Abaqaraw ( East Emi).
Waxaa la dhamaystiray (100%) qodida 29 ceelasha dhadheer iyadoo ay socdaan qodida ( iyadoo aydhiman tahay MDG ceelasha), 13 ceelasha dhaadheer. Sidoo kale waxaa la qoday 22 ceel gacmeed.
Waxaa la dhamaystiray dhismaha 10 ceel oo horay loo qoday (On-Spot construction) halka ay gabagabo marayaan dhismaha 2 ceel oo laqoday.
 Waxaa la dhamaysiray dhismaha Balaarinta 25ka xarumo biyood oo loogu talagaly xarumaha biyaha ee bulahasha iyo caafimaadkaba (health centers)  Waxaa daraasada iyo baadhitanka biyaha dhulka hoostiisa lagu sameeyay 27 goobood.  Waxaa la dayactiray 173 xarumo biyood, 70 matoorada waraabka iyadoo iibka sparepartiga lagudayactirayo motoorada kalena lawado.
 Waxaa la dhisay islamarkaana la hawlgaliyay 47 Gudiyada maamulka Xarumaha biyaha ah (Washco) oo loogu talagalay goobaha dibudajinta. Kobcinta Awooda Fulineed ee Sectorka Biyaha ( Water Sector Capacity Building)  Sanadkan waxaa waxbarashada Summerka ee Cilmiga Biyaha loogu deeqay shaqaalaha profesionalka ee xafiiska, madax xafiiseedyada biyaha ee dagmooyinka iyo khabiiradooda. Waxabarashdan 00 130 arday ay qaadanayaan degree cilmiga biyaha halka 20 ardayna ay qaadanayaan diploma cilmiga biyaha iyadoo ay kala siinayanaan jaamacada Jigjiga iyo TVET Collegka.
 Hayada JICA oo lagaleeyaha dalka Japan aya xafiiska ugu deeqday 7 Baabuur, 150 haamaha biyaha, Dawada biyaha nadiifisa halka 7 booyadoodna ay yaalaan Adis Ababa oo mardhaw lagurajawayn yahay waxaana bixinaysa Hayadda JICA Gulaaha am Best Practiseka sanadkan.
 Ururinta iyo ka faaiidaysiga biyaha roobka  Fudinta waxbarasha sumerr programka cilmiga biyaha heer deegaan, councilada iyo heer dagmo  Hirgalinta ama tijaabinta mashaariicaha solar systemka oo lagu xidhayo mashaaricaha biyaha